किन बढ्दै छ अनियमित महिनावारीको समस्या? – Health Post Nepal
किन बढ्दै छ अनियमित महिनावारीको समस्या?
२०७८ फागुन १६ गते १०:०६
काठमाडौं – कोरोनाले हाम्रो जीवनमा धेरै तरिकाले असर गरेको छ। चाहे त्यो पुरुष होस् वा महिला सबैजना यसबाट पीडित छन्। महिलाको कुरा गर्दा उनीहरु शारीरिक तनावका साथै मानसिक तनावको सामना गर्न बाध्य भएका छन्। महिलाहरुमा पछिल्लो समय कोरोनाले महिनावारी चक्रमा असर गरेको कुरा बाहिर आइरहेका छन्। जसले महिलाहरूलाई मानसिक र शारीरिक तनाव दिएको छ। धेरै महिलाहरूले आफ्नो मासिक चक्रमा समस्या अनुभव गरेका छन्, विशेष गरी भाइरसबाट संक्रमित भएपछि। र केहीमा खोप लगाइसकेपछि पनि यो चक्रमा असर देखा परेको छ।
यस्तो किन हुन्छ र यसको पछाडिको कारण के हो भन्ने थाहा पाउनुअघि तपाईंले के जान्न आवश्यक छ भने हरेक महिलाको महिनावारी चक्र फरक-फरक हुन्छ। सामान्यतया यो चक्र २८ दिनको हुन्छ। ५ दिन सामान्य रक्तस्राव हुन्छ। यो केवल औसत हो। तर, यसको वास्तविकता महसुस गर्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ।
यसबीच, यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ कि महिनावारी चक्रको समयमा रक्तस्रावको अवधि कति हुन्छ, कति रक्तस्राव हुन्छ र चक्रको लम्बाइ कति हुन्छ? यो प्राकृतिक रूपमा नै महिलाहरूमा समयसँगै परिवर्तन हुँदै जान्छ। इन्टरनेशनल फेडेरेसन अफ गाइनोकोलोजी एन्ड ओब्स्टेट्रिक्सका अनुसार महिनावारीको अवधि आठ दिनसम्म हुन सक्छ, जुन सामान्य हो।
महिनावारी चक्र मस्तिष्कमा रहेको हाइपोथ्यालेमस र पिट्यूटरी ग्रन्थीको साथ अंडाशयद्वारा नियन्त्रित हार्मोनहरूको मिश्रणद्वारा नियन्त्रित हुन्छ। जसलाई तपाईं ‘एचपीजी एक्सिस’ भन्न सक्नुहुन्छ। शरीरमा कुनै पनि प्रकारको समस्याले एक्सीसलाई हर्मोन निकाल्न गाह्रो बनाउँछ जसले तपाईंको महिनावारी चक्रलाई असर गर्छ। चाहे त्यो अवधि होस् वा लक्षणहरू।
उदाहरणका लागि, यदि तपाईं धेरै व्यायाम वा डाइटिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईं तपाईंको पिरियड्स मिस गर्न सक्नुहुन्छ तर यो त्यतिबेला उल्टो हुन्छ जब तपाईं खानाको मात्रा बढाउनुहुन्छ र व्यायाम कम गर्नुहुन्छ। त्यसैले आफ्नो शरीरको ख्याल राख्नु निकै जरुरी हुन्छ।
यी सबैबाहेक कोरोना महामारीको तनाव पनि चक्रलाई प्रभावित गर्ने ठूलो कारक हुन सक्छ। तनावले एचपीजी एक्सीसमा दबाब दिने काम गर्छ र धेरै अध्ययनहरूले तनाव र महिनावारी चक्रबीच सम्बन्ध रहेको पनि देखाएका छन्। त्यसैले पनि तनावले तपाईंको महिनावारी चक्रलाई प्रभावित गरेको हुन्छ। तनावले तपाईंको महिनावारी चक्रमा अनियमितता र लामो समयसम्म रक्तस्राव पनि गराउन सक्छ।
महामारी बाहेक तपाईंको महिनावारी चक्रलाई असर गर्ने धेरै कारकहरू छन्। यसमा तौल बढ्नु, अत्याधिक मदिरा सेवन पनि समावेश छ। जुन महामारीको समयमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको पाइएको छ। यी कुराहरुले पनि तपाईंको चक्रमा अनियमितता ल्याउन सहयोग गर्दछ।